Abuur shaxda koorso leh AutoCAD madaniga 3D - Geofumadas
Janaayo, 2009 AutoCAD-AutoDesk, topografia
Waxaan xusuustaa in muddo ah kahor inta aan ka hadlayay sida tan ku samee Softdesk, waxaan sidoo kale aragnay qaar ka mid ah dilalka si aan uga dhigno qaylada sawirka la dhisay Excel.
Xaaladdan waxaan ku dhajin doonaa AutoCAD Macaamiisha 3D, taas oo ah ururka midka macaamiisha ee AutoCAD iyo Autocad 3D. Jidka dhexdiisa, bey'aduna waa dhul aad u eg, sidaas darteed waxa aan ka warqabnay CivilCAD maahan wax faa'iido leh.
On menu ka tagay dejinta waxaad dooran kartaa functionalities ah, haddii ay taasi awood u Buuxi Civil 3D si aad u aragto oo dhan bedeley, laakiin waad arki kartaa meelo kala duwan labada sahan, design, Geospatial iwm
Waxaan leeyahay hanti kaas oo aan ku dhisay baadiyaha, iminka waxaan rabo waa inaan abuuro sawirka jihooyinka iyo masaafada.
1. Abuuri qaybta
Taas awgeed waxaan ka dhignaa "jajab / Abuur"
Kadibna waxaan doorannaa dhammaan xariijinta xargaha (ma aha sida polyvin)
Kadibna nidaamku wuxuu soo bandhigayaa guddi aad adigu doorato goobta, qaabka, layers halkaas oo hantida xariiqda iyo centroid iyo dhir kale oo qadhaadh ah la keydin doono ...
Laga soo bilaabo halkan waxaan dooranayaa inaan si toos ah u geliyo calaamadaha (calaamadaha) qaybaha.
Waxaan ka soo bixiyay ikhtiyaarka si aan u tirtiro geeska asalka ah.
Ka dibna waxaan sameynaa 0k, waa in si toos ah loogu rakibaa aroid centroid halkaasoo goobta uu ka kooban yahay.
2. Samee miiska koorsada
Tani waxaan samaynaa "Miisaska Qashinka / Qeybta", taas oo macnaheedu yahay samaynta jaantuska muraayadaha iyo fogaanta laga soo bilaabo khadadka.
Guddi soo baxa ayaa na weydiisanaya qaabka aan u adeegsan doonno iyo haddii aan dooneyno miiska inuu noqdo mid deggan ama mid firfircoon (taas oo isbeddel ah sida ku xusan xudduudaha isbeddelay)
Kadibna waa inaad gujisaa halka aan rabno.
3. Tafaasiisha qaabka miiska
Habka miiska waxaa lagu dhajin karaa, badhanka mouseka ee miiska la soo saaray iyo dooranaya "qaabka qaabka"
Oo halkan waxaad bedeli kartaa magacyada miiska, madaxyada, jajab tobanlaha qaabka dhererka iyo xaglaha.
Post Previous«Previous Maxaa la sameeyaa kuwa soo booqda xun
9 Jawaab in "Abaabulaan shaxda koorso leh AutoCAD Meelaha 3D"
dusha sawir-qaadashada isagu wuxuu leeyahay:
Professor Alvarez: Gaadiidka Autodesk Civil 3d 2009 waxay u muuqdaan inay yihiin SIT
Gawaarida Autodesk Civil 3d 2009 waxay u muuqdaan inay yihiin SIT
beeraha isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan la mid ah sida Yasser ahay, at CNR ee El Salvador wax dhib ah in aanay i aqbali khadadka sanduuqa (L1, L2, iwm) iyo waxa ay u baahan yihiin waa sanduuq sheegay in dhibic (P1 in P2, iwm) waxaan samaynayaa in beddelid this laakiin ma ii saaxirad midna ka tago. I caawin kara?
roogaga spinoza khatarta ah isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsan tahay inaad na tusto boggan aad ufiican, su’aashaydu waxay tahay maxaa ka jira buug-yarahan sida loo isticmaalo saldhiga guud, dhammaantood waxay ku jiraan qoraallo lama soo dejisan karo, waan u mahadcelin lahaa haddii aad ku ridi lahayd meel bilaash ah.
BRAULIO NAVARRO isagu wuxuu leeyahay:
Iyadoo macluumaadka wanaagsan ee noocan oo kale ah qof kasta oo isticmaala 3D, wuxuu abuuri karaa miiska, aad ayaad u mahadsantihiin.
Hadda, marka laga reebo sameynta miiska koorsada iyo masaafada waxaan jeclaan lahaa inaan barto sida loo abuuro Xidhiidhada X, Y (UTM), HAPPY YEAR 2011,
Aad bay u fiican tahay, way ii adeegtaa, laakiin si aan u dhammaystiro, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loo tafatiro qaybta L1, L2 ... L7, qaab kale oo ah nooca '1-2, 2-3 ... 7-1, iyo sidoo kale haddii aad u beddeli lahayd qaabka koorsada illaa Kaliya Degree iyo Daqiiqado. Siyaabo badan ayaan isku dayay laakiin waxba kama jiraan.
Ing. Colunga isagu wuxuu leeyahay:
Fikrad ma laha, anigu ma haysan qaabkan Ribbon
halkaas oo aan ka heli karo warqadaha xNUMX version, sideen u sameeyaa?